I-Barn Alpine Holiday Home Jacksons Arthurs Pass
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jacksons Retreat Alpine
I-Self Catering Self Contained Extra Large 3 Bedroom Apartment
Ingqikithi yesikhala saphansi @ 92 square metre
Amakamelo okulala angu-3
I-1x Queen + 1x I-Double/Bunk Bunk Duo + 2x I-Bunk Single + 1x Queen & 1x Engashadile
Wonke amalineni, amathawula nezinto zokugeza ziyahlinzekwa
Izinsana: Ngombhede kanye nelineni siqu kumahhala
Indawo yokuphumula enkulu enethezekile nendawo yokudlela, i-Log Fire, i-TV.
Ikhishi eligcwele lokuziphekela.
Ishawa kanye neToilet.
I-BBQ + Indawo Yepikiniki.
I-Double Garage XL, ulethe wonke amathoyizi akho, indawo yokupaka ebanzi.
I-"The Barn" Alpine Holiday Home itholakala endaweni ekahle futhi isendaweni emaphakathi kuzo zonke izindawo Zokuzijabulisa e-West Coast futhi ilungele abahambi abanwetshiwe base-Southern Alps noma izivakashi ezincamela ukuphumula futhi zijabulele i-West Coast 100% NZ Native Rain Forest.
Izivakashi ezihlala eJackson's zijabulele ngokukhethekileyo futhi mahhala I-Ngarimu Walking Track yethu lapho uzojabulela khona u-100% we-NZ Native Rainforest, i-Waterfall eyingqayizivele - phonsa!, ulandelele ukuya emayini ye-Quartz yango-1860 kanye nezinsalela kanye nesikhathi sakho esilandelayo ukuze ubone imvelo izimangaliso ezincane, kumnandi Glow Worm dells.
Njengoba singamakhilomitha angu-174 kuphela ukusuka e-Christchurch Airport kanye no-200km ukusuka endaweni ye-Glacier sikumise kahle ukuthi ukwazi ukujabulela zonke izindawo zokuzijabulisa ezitholakala e-West Coast futhi wazi njalo ukuthi ukubuyela kwakho ekhaya endaweni yokuhlala yangasese nenethezekile.
Uma ukudoba kuyintandokazi yakho iLake Brunner iyindawo egcinwe kakhulu eyimfihlo ye-Brown Trout.
U-ARTHURS PASS – MOANA/LAKE BRUNNER – GREYMOUTH – HOKITIKA – PUNAKAIKI - GLACIA REGION
Ukuqwala izintaba, Ukunyathela, Ukuhamba, Imizila Yebhayisikili, Ukubuka Izinyoni, Ukubhukuda, Ukudoba, I-Kayaking, I-Skiing & I-Star Gazine
IBarn itholakala 2hrs drive West of Christchurch, 30 mins West of Arthurs Pass and 20mins South of Moana, Lake Brunner noma 50mins East of Hokitika/Greymouth.
4.81 ·118 okushiwo abanye
4.81 · 118 okushiwo abanye
I-Arthurs Pass – 33km's ukuya edolobhaneni kanye ne-I-Site lapho uzokwazi ukukhetha osukwini noma isonto lonke lokuzidela - Ukuqwala Izintaba, Ukunyathela, Ukuhamba, Ukuhamba Ngebhayisikili Nezinyoni & Nokubuka Kwemvelo ukuze kulingane nezifiso noma amakhono akho. Ukuya edolobhaneni kuwuhambo olujabulisayo ngokwakho, i-Otira Gorge iyisimangaliso sobunjiniyela futhi i-Arthurs Pass iyindawo edlula yonke indawo eSouth Island.
ILake Brunner neMoana – ibanga elingamakhilomitha angama-33 ukuya ohlangothini lweNorthern Lake noma amakhilomitha ayi-15 ukuya ohlangothini lweSouthern Lake. Le ndawo izokunikeza izindlela eziningi Zokuqwala Izintaba, I-Tramping & Walking ozothola ukuthi ikhethekile futhi ayithinteki uma uyiqhathanisa ne-Arthurs Pass. I-Lake Brunner Hotel "iyindawo" yethu futhi i-StationHouse Cafe inikeza ukubukwa okuhle kakhulu kwechibi ngemenyu yayo egcwele yesidlo sasemini/isidlo sakusihlwa.
Ukudoba – abantu bendawo abagcinwe kuyimfihlo “Brown Trout”, bame onqenqemeni lwamachibi bahlanganise isidlo sakusihlwa noma bathinte umhlahlandlela wethu wendawo we-Trout Fishing Safari's.
I-Christchurch – 178km eMpumalanga ye-Jackson's
Hokitika – 66km eseNingizimu Ntshonalanga kaJackson
Greymouth - 67km eNyakatho Ntshonalanga kaJackson
IPunakaiki – 107km eNyakatho Ntshonalanga kaJackson
Isifunda saseGlacia, Fox & Franz – 223km eseNingizimu Ntshonalanga kaJackson